Wararka - Midkee ayaa adiga kugu habboon mashiinka nadiifinta
Wax-qabad-sameeyayaasha Waxqabadka Labada ah
DA saxamada taakuleynta
Suxuunta Taageerada Rotary
Suufiyada Xambo xumbo
Suufyada Wax Lagu nadiifiyo
Gawaarida Faahfaahinta Gawaarida
Buufinta Xumbo Xumbo
Laydhka Xumbo Baraf
Dhalooyinka Buufiyo Kordhinta
Keebaa adiga kugu habboon mashiinka nadiifinta
Keebaa adiga kugu habboon mashiinka nadiifinta?
Maalmahan, waxaa jira noocyo badan oo mishiinnada wax lagu nadiifiyo ah ee suuqa yaalla, laakiin caadi ahaan waxaa loo qaybin karaa saddex nooc, kuwaas oo kala ah makiinadda wax lagu beddelo, laba-fal-qaade, iyo rooga rogista lagu qasbo ee da.
Mashiinka wax lagu beddelo waa mashiinka nadiifiya oo adeegsada kaliya 1 nooc oo dhaqdhaqaaq ah si loo abuuro waxyeello wax lagu nadiifiyo. Aad ayey ugu fiican tahay goynta, si dhakhso leh ayey u shaqeysaa, laakiin sidoo kale waxay u baahan tahay khibrad iyo aqoon aad u badan oo si habboon loo isticmaalo.
Mashiinka waxqabadka laba-geesoodka ah wuxuu adeegsadaa dhaqdhaqaaq wareeg ah oo ay weheliso dhaqdhaqaaq wareeg ah si loo abuuro fal laba-geesood ah oo caqli gal ah. Dhaqdhaqaaqaani waa mid waxtar leh marka mashiinka lagu nadiifiyo dusha sare. Mashiinka waxqabadka laba-geesoodka ah ayaa caan ku ah inuu fudud yahay la shaqeynta, taasoo ka dhigaysa mid ku habboon bilowga.
Mashiinka wareejinta qasabka ah waa isku-darka qaababka wareega iyo laba-ficil.
Sidoo kale waa shaashad laba tallaabo ah, oo ku meeraysanaysa meerisyo kala duwan, sidaas darteedna kuleylka ugu sii qeybineyso rinjiga, taas oo ka dhigeysa mid ka ammaan badan midda wax lagu nadiifiyo. Laakiin ma joojin doonto wareejinta iyadoon loo eegin hoos u dhaca aad u isticmaaleyso marka la barbardhigo makiinadda laba-tallaabada ah. Isku soo wada duuboo, wareegga qasabka ah wuxuu bixiyaa ficil goyn wanaagsan marka loo eego DA, laakiin faahfaahin faahfaahsan oo otomaatig ah ayaa la barbar dhigayaa meertada.
Xullo Polishher Waxqabadka Labaad haddii:
1.Waad ku cusub tahay mashiinka nadiifinta;
Waxaad dooneysaa wax fudud in la isticmaalo;
3.Waxaad dooneysaa inaad waxoogaa wareeg ah iyo xoqid fudud ka saarto rinjigaaga;
4.Waxaad kaliya daryeeshaa gaarigaaga ama baabuurta qoyskaaga;
5.Waad raadineysaa mid nadiif ah, laakiin ka awood badan polisherka baabuurka;
6.Waxaad dooneysaa inaad si joogto ah ugu isticmaasho si aad u ilaaliso shaqadaada rinji;
7.Waxaad dooneysaa inaad bilowdo ganacsi waqti dhiman ama waqti buuxa ah oo faahfaahinaya;
8.Waxaad raadineysaa qalab si loo hubiyo dhammaystir bilaash ah;
9.Boats/RV ama milkiilayaasha diyaaraduhu waxay raadinayaan hab kafiican, dhaqso badan, oo nabdoon si ay u ilaashadaan doomahooda / RVs / diyaaradaha.
Xullo Wareeji Qasab ah DA Polisher haddii:
1.Waxaad raadineysaa boolis nadiif ah, laakiin ka awood badan;
Waxaad ku cusub tahay mashiinka nadiifinta laakiin waxaad awood u leedahay inaad si dhakhso leh wax u barato;
3.Waxaad isticmaashay laba tallaabo oo wax lagu nadiifiyo oo waxaad diyaar u tahay tallaabada xigta;
4.Waxaad rabtaa natiijooyinka in lagaarsiin karo meertada oo leh dhammaan amniga DA!
Xullo Polisher Rotary ah haddii:
1.Waxaad leedahay cilado culus oo rinjiga ah oo aad runtii rabto inaad ka saarto;
2.Waxaad haysataa wakhti yar oo aad ku qabato sida mishiinku u shaqeeyo;
3.Waxaad leedahay ganacsi faahfaahinaya oo raba inuu ku daro qalab aad u awood badan;
4.Waxaad rabtaa inaad noqoto xirfadle wax xira;
5. Waxaad tahay qof xiiseeya oo bartay mid ama in kabadan oo kamid ah kooxaha kale ee aaladaha oo aad hada diyaar u tahay inaad udhaqaaqdo shaashadda wareega.
Waqtiga boostada: Sep-16-2020
Room 2107, Dhismaha 12, Xincheng Injoy Plaza, No.77, Aixihu North Road, Degmada Gaoxin, Nanchang City, Gobolka Jiangxi, Shiinaha